Newsenepal:: नेपाल आइडल सिजन ३ को विजेता को बन्ला त !
नेपाल आइडल सिजन ३ को विजेता को बन्ला त !
काठमाडौं, कोरोना महामारीको बेला, आज शुक्रबारको दिन सबैको मनमा को बन्ला त यसपालिको विजेताः सज्जा चौलागाईं, प्रविन बेडवाल की किरण कुमार भुजेल भन्ने जिज्ञासाले छट्पट्टी बनाइराखेको छ । अब को केही घण्टा भित्री नै यसको नजिता त आउने नै छ । तर पनि प्रतिस्पर्धीहरुलाई भन्दा नि उनीहरुका फ्यानहरुलाई उनीहरुको स्वरमा मुग्द हुनेहरुलाई धेरै छटपट्टी बनाइरहेको छ ।
यस पालिको बलियो प्रस्तिप्रर्धी को होला त ?
तीनै जना आआफ्नै विधामा दमदार देखिन्छ जसले गर्दा यसपालिको विजेता यही नै हुन्छ भन्ने जो कोहीलाई पनि अनुमान लगाउन गाह्रो देखिएको छ ।
यी तीन जनामा सज्जा चौलागाईको स्वर अलिक बेग्लै खालको छ जसको कारण उनी जज देखि अरु जोकोही पनि उनको स्वरमा मग्न मुग्ध भएको देखिन्छ र खास गरी उनको रक खालको गीतहरु अति सुन्दर सुनिने गर्दछ र सबै जना मुग्ध भएको पाइन्छ । तर उनी आफ्ना फ्यानहरुको अनुरोधमा लोक, आधुनिक तथा अंग्रेजी पनि उत्तिकै राम्रो गाउने गर्दछिन् त्यसैले पनि होला धेरै जसो पुरस्कार पनि उनीले पाएको देखिन्छ । सज्जाका राम्रा प्रस्तुतहरु मध्य म संसार जित्ने आंट गर्दैछु..... पनि एक हो ।
यसै गरी अर्का प्रतिस्पर्धी प्रविन बेडवाल पनि कोही भन्दा कोही कमी छैनन् उनको स्वरमा पनि जादु नै जादुले भरिएको छ । उनका फ्यानहरु पनि प्रसस्त मात्रामा नै देखिन्छ । उनको स्वरको जादुको कारणले जजहरुलाई पनि घायल नै पार्ने गरिएको पाइन्छ । उनी पनि पुरस्कार पाउनेमा सज्जा सरहमा नै पाइरखेको देखिन्छ । उनी खास गरी क्लासिक शैलिका गीतहरुमा उनको प्रस्तुती राम्रो देखिने गरेको पाइन्छ । प्रविनका राम्रा प्रस्तुतहरु मध्य उ जितेर गइ वा हारेर गइ.... पनि एक हो ।
त्यस्तै गरी अर्का प्रतिस्पर्धी किरण कुमार भुजेल पनि उत्तिकै प्रतिभाशाली गायकी स्वरका धनी भएका प्रतिस्पर्धीमा नै गनिन्छन् । उनी प्रथम नेपाल आइडल हुँदै तेस्रो नेपाल आइडलको वाल्डकार्डबाट जोडिन आएका उनी अहिले तीन प्रतिस्पर्धीहरु मध्य यिनी पनि एक बलिया प्रतिभावान प्रतिस्पर्धी हुन् । उनी पनि जजहरुको नजरमा राम्रा गायकीको स्वरका धनीको रुपमा चुनिनुका साथै धेरै पल्ट पुरस्कृत पनि भैइसकेका छन् र उनी खास गरी मेलोडी किसिमका गीतहरुमा अति नै राम्रो प्रस्तुती दिएको पाइन्छ ।
किरणको राम्रा प्रस्तुतहरु मध्य हाम्रो मायामा कुरा चलेयो जात र भातको ..... पनि एक हो ।
यसै कारणले जो कोहीलाई पनि कसलाई भोट गर्ने भन्ने दुबिधामा भएको देखिन्छ । तीनै जनाका आआफ्नै प्यानहरु उतिकै मात्रमा भएको पाइन्छ त्यसैले पर्ख अनि हेर भन्ने बाहेक अरु केही भन्न सकिने कुनै आधार छैन ।
तीन मध्य जो कोही पनि विजयी भए पनि उसको लागि अग्रिम शुभकामना छ र नहुनेलाई पनि पछी नहट्नु तपाईहरु पनि विजयी नै हो यो ठाउँ सम्म आउनु नै विजयी भए जत्तिकै हो ।
119508/28/2020 @ 13:20
अदालतमा बामदेव गौतम विरुद्ध रिट दायर
संबिधान दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्रिबाट देशवासीका नामा संबोधन